Tababaraha Chelsea Tuchel Oo Ka Hadlay Xaalada Bartilmaameedka Barcelona Ee Azpilicueta
HomeWararka CiyaarahaTababaraha Chelsea Tuchel oo ka hadlay Xaalada bartilmaameedka Barcelona ee Azpilicueta
May 19, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa qirtay kabtanka Cesar Azpilicueta inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Barcelona .
kooxda ayaa dhanka kale taageertay Antonio Rudiger iyo Andreas Christensen , oo labaduba qandaraaskiisu uu dhacayo xagaagan, kuwaasi oo lagu wado inay si xor ah ugu dhaqaaqaan Real Madrid iyo Barcelona .
Inkastoo Azpilicueta uu sameen karo qandaraas kordhin ka dib dhowr kulan oo uu saftay, tababaraha Blues Tuchel ayaa qirtay inay u oggolaanayaan inuu u tago Barcelona ka dib 474 kulan oo uu u saftay tartamada oo dhan toban sano oo shaqo fiican ah.
Waxa uu yidhi: “Waxa aan dareemayay in uu wax walba ku guulaystay kadib koobkii Club World Cupka,kadib si lama filaan ah marka loo eego xaaladiisa gaarka ah waxa aan fahmi karaa fikradahan laga yaabo in meertadu ay dhamaad ku dhowdahay, sidaas darteed waxaa laga yaabaa inay kordhiso xitaa fikradihiisa labaad ee ku saabsan xaaladdiisa.
“Waqtiga qaar, haddii aad tahay halyeey, waxaad u qalantaa sidoo kale aniga iyo kooxda, fiiri labaad, waxaa laga yaabaa inay jirto wax ka baxsan sharciga oo aan wali ku jirno howshan. ma ka takhalusi karo dareenkan, haddii ay tahay inaan uga hadalno si furan, si dhab ah oo ixtiraam leh sababtoo ah wuu u qalmaa.